Wasiirka Maaliyadda Beyle oo saxiixay Heshiiska Cafinta Deymaha Soomaaliya - Jowhar Somali news Leader
Home News Wasiirka Maaliyadda Beyle oo saxiixay Heshiiska Cafinta Deymaha Soomaaliya
Wasiirka Maaliyadda Beyle oo saxiixay Heshiiska Cafinta Deymaha Soomaaliya
Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya Dr C/raxmaan Ducaale Beyle iyo Madaxweyne ku xigeenka Bankgiga Hormarinta ee hormarinta Gobalka Khaled Sherif ayaa maanta oo isniin ah, kala saxiixday $122.55 million oo doolar, si loogu taageero qorshaha hormarka Soomaaliya,loona xoojiyo nabada iyo hormarka dhaqaalaha iyada oo la yareenayo saboolnimada.
Madaxweyne ku xigeenka Bankgiga Khaled Sherif ayaa ugu baaqay Beesha Caalamka iyo dowladda Soomaaliya, si wadida iskaashigan mira dhalka ah, isagoo dhamaan dhinacyada kale ka dalbaday inay wajahaan sidii ay ugu taageeri lahaayen dowladda inay sii waddo hirgalinta dib u habeyntaas.
War saxafadeed kasoo baxay Bangiga Hormarinta Afrika ayaa lagu sheegay in saxiixa heshiiskan uu ahaa mid daba socday ansixinta 26-kii Febraayo uu gudiga Bankiga Hormarinta Africa ku ogolaadeen qaabka deynta looga cafinayo Soomaaliya, waana marxaladii labaad taas oo dowladda Ingriiska iyo midowga yurub ay ku bixinayaan taageerada maaliyadeed ee lagama maarmaanka u ah deyn cafinta Soomaaliya, si bangigu xiriir cusub oo teero ula bilaabo Soomaaliya.
“Howlgalkani waxa uu muujinaya, xiriirka cusub ee dhaxmaraya Dowladda Soomaalya, Dadka Soomaaliyeed iyo Bankgiga, waxaan rajeeneynaa in xiriirka jira uu sii wanaasanaado, sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa madaxda Bangiga iyo howladeenada Bangiga ee Soomaaliya, kuwaas oo u shaqeeyey si hagarla’aan ah, si ay xaqiijiyaan maalintan taariqiiga ah. Intaa waxaa dheer oo aan uga mahadcelineyna dowladda Ingriiska hormuudnimadeeda hanaanka deyn cafinta Soomaaliya ee taageerida dhaqaale oo ay ku wehliyaan Midowaga Yurub” sidaas waxaa yiri Wasiirka Beyle.
Kusimaha Agaasimaha Bangiga ee Bariga Afrika Nnenna Nwabufo ayaa bogaadisay dadaalada ku aadan dhismaha Soomaaliyo wanaagsan, waxa ay hoosta ka xariiqday caqabadaha jira, iyado oo muujisay in laga gudbi karo iyadoo la dabaqayo aragtida wax laga badalayo fikradaha laga heysto Soomaaliya iyo isbdalada hada dhacaya.
Nnenna ayaa xustay sida ay dadbadani bilowgii dib u habeyntan ugu heysteen mid aan suuragal aheyn in laga mira dhaliyo, oo ay xal u helaan madaxada iyo dadka Soomaaliyeed, balse waxa ay uga mahacelisay sida ay arintaas hiragaliyeen.
War Saxaafadeed kasoo baxay Bangiga Hormarinta Afrika ayaa lagu sheegay in Soomaaliya ay sameeysay Hormar la taaban karo oo dhinacyada siyaasada,amaniga iyo hormarka dhaqaalaha, inkasta oo ay ku horgudbanyihiin caqbado. Heshiiskani dhexmaray Dowladda Soomaaliya iyo Bangiga hormarinta Afrika ayaa lagu sheegay mid bangiga u ogaalan ka caawinta Soomaaliya, xoojinta awoodaha hay’adaha iyo hormarinta xirfadaha si loo hormariyo maamul wanaagsa dalka.
heshiiska deyn cafinta soomaaliya